Osetia Atsimo:Naka tàhaka an’i Kosovo ve? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Aogositra 2008 9:52 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Español, 繁體中文, 简体中文, English
Raha nanambara samirery ny fizakan-tenany i Kosovotamin’ny 17 febroary 2008, dia nizarazara be ihany ireo fiorenena maro manerantany ny amin’ny maha-aradrariny na tsia iny fihetsika iny Amin’izao fotoana izao, 45 amin’ireo firenena 192 mpikambana ara-dalàna ao amin’ny Firenena Mikambana no nankato tanteraka ny Repoblikan’i KosovoSinganina amin’izany ny firenena maromaro ao anatin’ny Fiombonam-be Eropeana (20 amin’ny 27). Na izany aza, misy vitsivitsy toa an’i Espana, Silovakia, Romania, Gresy na Sipra tsy nakato ity fahaleovantena ity, noho ny tahotra ireo mpitaky fizakan-tena any amin’izy ireo tsirairay avy, ka mijery ny fahaleovantenan’i Kosovo ho toy ny ho tari-dàlana fakan-tahaka. Tsy toy izay kosa ny fijerin’ny filoha Rosiana, Vladimir Poutine.
Tamin’ny 18 febroary, namoaka lahatsoratra iray momba ny fanambarana samirery ny fahaleovantenan’i Kosovo ny tranonkalan-tseraseran’ny Masoivoho Reuters. Ny lahatsoratra, izay nitondra lohateny hoe “Niarahaba ny fahaleovantenan’i Kosovo ny mpioko tchétchènes ” , dia milaza toy izao [amin’ny teny anglisy] :
Hoy i Stanley Crossick tao amin’ny blaoginy tamin’ny 22 febroary 2008 :
Ao amin’ny blaogin’ny The Guardian Comment is Free, tamin’ny 23 febroary 2008, no nitondran ‘i Irina Filatova, mpampianatra toekarena ao Mosko sady mpikaroka any amin’ny Anjerimanontolon’ny KwaZulu-Natal ao Afrika Atsimo fanamarihana toy izao [amin’ny teny anglisy] :
Maro no nihevitra fa hanararaotra ity tranga ity ny Rosiana mba hankatoavana ireo Repoblika mpisintaka any Zeorzia, Abkazia sy Osetia Atsimo, ary angamba koa i Transnistria, faritra mpitaky fisintahana ao Moldavie.
[…] Lazain’ny Amerikana fa tsy voalohany akory ny tranga Kosovo, fa tranga maningana fotsiny. Sarotra be ny hino an’izany. Raha misy firenena iray mikasa hisintaka mba hanagana ny fanjkakany manokana, tsy manan-javatra betsaka hatao amin’izany ny governemanta, afa-tsy ny hoe hitazona azy ho eo ambany vahohony amin’ny alalan’ny fampiasan-kery. […] Nanampy ny Amerikana mihitsy ny fahaleovantenan’i Kosovo, hanehoana amin’izao tontolo izao fa tsy manana kakay amin’ny Silamo akory ry zareo, fa ireo firenena be mokon-doha ihany, izay silamo ny sasantsasany […] Nefa tsy hanohana ny Basques ry zareo, na ny Wallons, na ny Kiorda, ny Transnistriana moa tsy lazaina intsony.
Tamin’ny volana Aprily 2008, tao anatin’ny Prospect Magazine, dia hoy i Shaun Walker [amin’ny teny anglisy] :
Tohina toy ireo mpitoraka blaogy maro hafa, i Jelena Milić, raha nahare ny vaovao. Hoy indrindra izy [amin’ny teny Serba] mikasika io tranga io ao amin’ny blaoginy ao amin’ny Serbian news portal B92 :
Fa misy inona ? Fa tsy tokony hitsahatra ve ny ady rehefa manomboka ny Lalao Olaimpika e?
Ny mpitoraka blaogy Giles Elgood avy amin’ny Reuters, no nanoratra lahatsoratra iray [amin’ny teny anglisy] mitondra ny lohateny hoe “Mifamatotra amin’izay misy any Kosovo ve ny ho avin’i Osetia Atsimo?” , Hoy izy nanontany tena:
Horaisina ho toy ny tomponandraikitra amin’ny ady any Osetia Atsimo ve i Kosovo?
Raha nisintaka ny faritany serba iray tamin’ny febroary, i Osetia Atsino andalan’ny fanamafisana ny fangatahany ny fankatoavan’izao tontolo izao.
Ankehitriny dia manohana ny mpitaky fizakan-tena I Mosko, ary tsy mbola hita mazava izay azo hamaritana ny ho fivoaran’ny toe-draharaha amin’ity indray mitoraka ity.
i Austin Bey dia tsy manaiky izany. Ho azy dia tsy azo ampitahaina ireo disadisa roa ireo, ny an’i Kosovo sy Osetia Atsimo :